အမှတ်တရလေးများ: သြဂုတ်လ ဆွမ်းအလှူရှင်များစာရင်း(မေတ္တာရှင်ဖောင်ဒေးရှင်း၊စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး ဆွမ်းလောင်းအသင်း)
သြဂုတ်လ ဆွမ်းအလှူရှင်များစာရင်း(မေတ္တာရှင်ဖောင်ဒေးရှင်း၊စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး ဆွမ်းလောင်းအသင်း)
သြဂုတ်လ-၁.(၁.၈.၂၀၁၂)ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကွယ်လွန်သူ မိဘနှစ်ပါးဖြစ်သော ဦးတင်ထွဋ်+ဒေါ်သန်းညွန့်တို့အား ရည်စူး၍သမီး- Dr.ခင်အေးမူ၊ဒေါ်မိမိတင်သား-ဦးအောင်လတ်+ဒေါ်နီလာမြင့်သား-ဦးမိုးအောင်ကျော်မြေး-စုထက်အောင်၊ဖြူထက်အောင် မိသားစု၏ အလှူ။(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)၂.(၄.၅.၂၀၁၂) စနေနေ့မအေးစုခိုင်(မေလေး) မှ မိခင် ဒေါ်မြရည် ၏ (၆၂)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ။(အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ)လစဉ်ဆွမ်းအလှူရှင်များ၏အလှူ(နေ့ဆွမ်းအလှူ)၃.(၅.၈.၂၀၁၂)တနင်္ဂနွေနေ့ကိုကျော်နိုင်(Kenny)+မဆွေဆွေခိုင်၊သား-မောင်ကောင်းမြတ်သူ(Asher)(စင်္ကာပူ)မိသားစုမှမဆွေဆွေခိုင်၏ မွေးနေ့အလှူ။(အရုဏ်ဆွမ်း)၄.(၆.၈.၂၀၁၂)တနလာင်္နေ့မယဉ်ယဉ်ပြုံး(စင်္ကာပူ)မှ ဖခင် ဦးစိန်ထွန်း၏ မွေးနေ့အလှူ။(အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ)ကွယ်လွန်သူ အဖွားဒေါ်ဖွားသက် အားရည်စူး၍ ကိုမောင်မောင်သက်+မတင်ရီ ၊ ကိုကြည်ရွှင်+မရွှေရွှေဋ္ဌေး ၊ကိုဇော်မင်းထွန်း(စင်္ကာပူ) နှင့် ကျန်ရစ်သူ သား၊သမီး၊မြေးတစ်စု (နေ့ဆွမ်းအလှူ)၅.(၇.၈.၂၀၁၂)အဂါင်္နေ့ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးအား ရည်စူး၍ ကိုငယ်လေး(စင်္ကာပူ)၏ အလှူ(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)၆.(၈.၈.၂၀၁၂)ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မူဆယ်အလှူရှင်များ၇.(၉.၈.၂၀၁၂)ကြာသပတေးနေ့ကိုဇော်မျိုးသက်(စင်္ကာပူ)၏ အလှူ(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)၈.(၁၀.၈.၂၀၁၂)သောကြာနေ့ကွယ်လွန်သူမိဘနှစ်ပါးဖြစ်သော ခမည်းတော်ကြီး ဦးကျော်လှိုင် +မယ်တော်ကြီးဒေါ်ပွဲရင်တို့အား ရည်စူး၍ အရှင်ဇနက(အဂါင်္မောင်) သန္တိသုခကျောင်း (လန်ဒန်) ၏ကုသိုလ်စေတနာ။(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)၉.(၁၂.၈.၂၀၁၂)တနင်္ဂနွေနေ့ကိုကျော်စွာဝင်း(စင်္ကာပူ)၏ မွေးနေ့အလှူ(နေ့ဆွမ်းအလှူ)၁၀.(၁၃.၈.၂၀၁၂)တနလာင်္နေ့ကိုအောင်မြင့်ဦး+မမေသဇင်အုန်း၊သား-Matthew မိသားစု(စင်္ကာပူ)(အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ)လမင်းအိမ်စာပေနှင့် ဓမ္မမောင်နှမများ(မူဆယ်)(နေ့ဆွမ်းအလှူ)၁၁.(၁၄.၈.၂၀၁၂)အဂါင်္နေ့မဝေေ၀လွင်(စင်္ကာပူ)၏ မွေးနေ့အလှူ(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)၁၂.(၁၅.၈.၂၀၀၁၂)ဗုဒ္ဓဟူးနေ့Huang Cheng Hsien+Lu Yun PingHuang Chu Jung ၊ Huang Yu Ting (TaiWan)(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)၁၃.(၁၆.၈.၂၀၁၂)ကြာသပတေးနေ့မူဆယ်အလှူရှင်များ(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)၁၄.(၁၉.၈.၂၉၁၂)တနင်္ဂနွေနေ့ကိုရန်နိုင်ချစ် + မသိန်းသိန်းဝင်း ၊ သမီးဦး တာရာလင်းလက်အောင် မိသားစု (စင်ကာပူ) (၁၉.၈.၂၀၁၂) မွေးနေ့အလှူ။(အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ)၁၅.(၂၀.၈.၂၀၁၂)တနလာင်္နေ့မခင်ငြိမ်းချမ်းဦး(မလေးရှား)(အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ)ရာသက်ပန်ဆွမ်းပဒေသာပင် အလှူရှင်များအဖွဲ့(နေ့ဆွမ်းအလှူ)၁၆.(၂၁.၈.၂၀၁၂)အဂါင်္နေ့မမေနန္ဒာ၏မွေးနေ့အလှူ(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)၁၇.(၂၂.၈.၂၀၁၂)ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကိုသက်မြင့်ဦး+မကေသီလွင်၊သမီး-လွင်မာမင်း မိသားစု(စင်္ကာပူ)(အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ)ရာသက်ပန်ဆွမ်းပဒေသာပင် အလှူရှင်များအဖွဲ့(နေ့ဆွမ်းအလှူ)၁၈.(၂၃.၈.၂၀၁၂)ကြာသပတေးနေ့Dr.မြတ်ဥာဏ်+ဒေါ်ဝါ၀ါခိုင်မင်း မိသားစု(ရန်ကုန်)မှသမီး-မေမြတ်နိုးခိုင်၏ မွေးနေ့အလှူ။(အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ)၁၉.(၂၆.၈.၂၀၁၂)တနင်္ဂနွေနေ့ကိုသူရဦး+မမီမီသော်(စင်္ကာပူ)မှ မမီမီသော်၏ မွေးနေ့အလှူ။(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)၂၀.(၂၇.၈.၂၀၁၂)တနလာင်္နေ့မခိုင်ဇာလင်း(စင်္ကာပူ)၏ မွေးနေ့အလှူ။(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)၂၁.(၂၈.၈.၂၀၁၂)အဂါင်္နေ့မအေးနန္ဒာဝင်းမောင်(စင်္ကာပူ)၏ မွေးနေ့အလှူ(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)၂၂.(၂၉.၈.၂၀၁၂)ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မယဉ်ယဉ်ပြုံး(စင်္ကာပူ)၏ မွေးနေ့အလှူ(အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ)မိုးမခမေ ၏ ဖခင် ဦးကြည်စိုး၏ (၆၃)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ(နေ့ဆွမ်းအလှူ)၂၃.(၃၁.၈.၂၀၁၂)သောကြာနေ့ကိုတင်ထွန်းအောင်(စင်္ကာပူ)၏မွေးနေ့အလှူ။(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)စက်တင်ဘာလစက်တင်ဘာလ၁.(၁.၉.၂၀၁၂)စနေနေ့ဦးမောင်မောင်သန်း+ဒေါ်ဥမ္မာဟိန်း ၊သား-မောင်ဥဂ္ဂါမင်း(ပါရမီ၊ရန်ကုန်)(အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ)၂.(၂.၉.၂၀၁၂)တနင်္ဂနွေနေ့ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီး(၁)နှစ်ပြည့် အားရည်စူး၍ကိုသက်ဇောထွန်းနှင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစု၏ အလှူ(နေ့ဆွမ်းအလှူ)၃.(၃.၉.၂၀၁၂)တနလာင်္နေ့ကိုသက်မြင့်ဦး+မကေသီလွင် ၊သမီး-လွင်မာမင်း မိသားစု(စင်္ကာပူ)(အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ)ရာသက်ပန်ဆွမ်းပဒေသာပင် အလှူရှင်များ(နေ့ဆွမ်းအလှူ)၄.(၇.၉.၂၀၁၂)သောကြာနေ့ကိုဝင်းမိုးစိုး+မခိုင်ဇာမောင် (စင်္ကာပူ)မှ ကိုဝင်းစိုးမိုး၏ မွေးနေ့အလှူ။(အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ)၅.(၈.၉.၂၀၁၂)စနေနေ့ကိုစိုးထိုက်+မမာမာထွေး(စင်္ကာပူ)တို့၏ (၁၂နှစ်)ပြည့် မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည် အလှူ(အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ)၆.(၁၀.၉.၂၀၁၂)တနလာင်္နေ့မိဘများကို အမှူးထား၍ သမီး-မဆုမြတ်မွန်(စင်္ကာပူ)၏ မွေးနေ့အလှူ။(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)၇.(၁၁.၉.၂၀၁၂)အဂါင်္နေ့ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီး ဦးသန်းမောင်အားရည်စူး၍ကိုဝင်းမိုးစိုး+မခိုင်ဇာမောင်(စင်္ကာပူ)၏အလှူ(အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ)ကိုမြင့်ဌေး+မတင်ဇာနီကျော်(စင်္ကာပူ)မှ မတင်ဇာနီကျော်၏ မွေးနေ့အလှူ(နေ့ဆွမ်းအလှူ)၈.(၁၂.၉.၂၀၁၂)ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မိဘနှစ်ပါးအားအမှူးထား၍ မသဇင်ခိုင် (US) ၏ မွေးနေ့အလှူ(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ) (KoZTK)၉.(၁၇.၉.၂၀၁၂)တနလာင်္နေ့ကိုရန်နိုင်ဝင်း (ဂျပန်) ၏ မွေးနေ့အလှူ(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)၁၀.(၁၈.၉.၂၀၁၂)အဂါင်္နေ့ကိုငြိမ်းချမ်းသူ +မ၀င်းလဲ့လဲ့အောင်၊သမီး-ဆုရည်လင်း မိသားစု(စင်္ကာပူ)၏ အလှူ(အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ)၁၁.(၁၉.၉.၂၀၁၂)ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဦးခင်အောင်တင်+ဒေါ်ခင်ခင်ဦး မိသားစု(စင်္ကာပူ)(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)၁၂.(၂၁.၉.၂၀၁၂)သောကြာနေ့မမူမူမောင်(ဒူဘိုင်း)၏ မွေးနေ့အလှူ(အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ)၁၃.(၂၂.၉.၂၀၁၂)စနေနေ့မအေးဇာလီ(စင်္ကာပူ)၏ မွေးနေ့အလှူ(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)၁၄.(၂၃.၉.၂၀၁၂)တနင်္ဂနွေနေ့မယဉ်ယဉ်ပြုံး(စင်္ကာပူ)မှ မိခင်ဒေါ်တင်တင်အေး၏ မွေးနေ့အလှူ။(အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ)၁၅.(၂၄.၉.၂၀၁၂)တနလာင်္နေ့ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီး ဦးစောအဇွန်(၇နှစ်ပြည့်)အား ရည်စူး၍ ဒေါ်နန်းခမ်းထွန်း မိသားစု(ဂျပန်)၏ အလှူ။(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)၁၆.(၂၆.၉.၂၀၁၂)ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မခင်ငြိမ်းချမ်းဦး(မလေးရှား)(အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ)ရာသက်ပန်ဆွမ်းပဒေသာပင်အလှူရှင်များ(နေ့ဆွမ်းအလှူ)၁၇.(၂၇.၉.၂၀၁၂)ကြာသပတေးနေ့ကိုကျော်ကျော်မိုး+မနှင်းဝေေ၀ဖြိုး(ရန်ကုန်)မှ မွေးနေ့အလှူ(အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ)၁၈.(၂၈.၉.၂၀၁၂) သောကြာနေ့ကိုစည်သူသိန်း+မမိုးသန္တာဝင်း ၊သမီးလေး-ယွန်းအလိမ္မာမိုး မိသားစု(စင်္ကာပူ)မှကိုစည်သူသိန်း၏ မွေးနေ့အလှူ။(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)၁၉.(၂၉.၉.၂၀၁၂)စနေနေ့ကိုကျော်သူရ(စင်္ကာပူ)၏ မွေးနေ့အလှူ။(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)အောက်တိုဘာလ-၁.(၃.၁၀.၂၀၁၂)ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဦးအောင်ဌေး+ဒေါ်မြတ်နွယ် ၊သမီး- မမြတ်မျိုးအောင် မိသားစု(စင်္ကာပူ)(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)၂.(၇.၁၀.၂၀၁၂)တနင်္ဂနွေနေ့Wat Kalay(FB)၃.(၉.၁၀.၂၀၁၂)အဂါင်္နေ့ကိုလှအောင်+မထားထားမြင့်မိသားစု (ဂျပန်)မှ မထားထားမြင့်၏မွေးနေ့အလှူ။(အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ)၄.(၂၂.၁၀.၂၀၁၂)တနလာင်္နေ့ကိုခင်မောင်ကျော်+Dr.နေကြည်မြင့်(စင်္ကာပူ)တို့၏ မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်အလှူ။(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)၅.(၂၄.၁၀.၂၀၁၂)ကွယ်လွန်သူ Dr.ဦးမင်းနိုင် အားရည်စူး၍ ဒေါ်ကြူကြူခင်၊သမီး-မဖြူဖြူသန့် ၊မချိုချိုသန့် (စင်္ကာပူ)တို့၏ အလှူ။ (အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)(အလှူငွေ လက်ခံရရှိပြီး ၁၆၀၀၀၀ ကျပ်+ 100 SGD)၃.(၂၇.၁၀.၂၀၁၂)စနေနေ့Dr.မြတ်ဥာဏ်+ဒေါ်ဝါ၀ါခိုင်မင်း၊သမီးလေး-မေမြတ်နိုးခိုင်မိသားစု မှ ဒေါ်ဝါ၀ါခိုင်မင်း၏ မွေးနေ့အလှူ။၄.(၂၈.၁၀.၂၀၁၂)တနင်္ဂနွေနေ့ကိုအောင်သက်လင်း+မယဉ်ယဉ်နု(စင်္ကာပူ)မှ မယဉ်ယဉ်နု ၏မွေးနေ့အလှူ။ (အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)(အလှူငွေ လက်ခံရရှိပြီး)၅.(၃၀.၁၀.၂၀၁၂)အဂါင်္နေ့ကိုကျော်ဇေယျ+မဇင်သူထက်(ဂျပန်)မှ ကိုကျော်ဇေယျ၏ မွေးနေ့အလှူ(အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ)နိုဝင်ဘာလ-၁.(၆.၁၁.၂၀၁၂)အဂါင်္နေ့ဒေါ်ရီရီ (USA) ၏ မွေးနေ့အလှူ (အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)၂.(၁၀.၁၁.၂၀၁၂)စနေနေ့မအေးမြတ်(စင်္ကာပူ)၃.(၁၈.၁၁.၂၀၁၂)တနင်္ဂနွေနေ့ပန်ပန်(ဂျာမဏီအလှူရှင်)၄.(၁၉.၁၁.၂၀၁၂)တနလာင်္နေ့ကိုခင်မောင်ကျော်+Dr.နေကြည်မြင့်(စင်္ကာပူ)မှ Dr.နေကြည်မြင့်၏ မွေးနေ့အလှူ။(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)ဒီဇင်ဘာလ-၁.(၁.၁၂.၂၀၁၂)စနေနေ့(ဂျပန်)၂.(၃.၁၂.၂၀၁၂)တနလာင်္နေ့မအေးမြင့်မွန်(အင်္ဂလန်)၏ မွေးနေ့အလှူ(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)(အလှူငွေ လက်ခံရရှိပြီး- ၁၇၀,၀၀၀ ကျပ်)၃.(၆.၁၂.၂၀၁၂)ကြာသပတေးနေ့ဦးမွန်မောင်အေး၏မွေးနေ့အလှူ(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)(အလှူငွေ လက်ခံရရှိပြီး- ၁၇၀,၀၀၀ ကျပ်)၄.(၁၀.၁၂.၂၀၁၂)တနလာင်္နေ့ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဦးဘသော်အား ရည်စူး၍ ဒေါ်ကြည်လေး မိသားစု(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)၅.(၁၂.၁၂.၂၀၁၂) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့Dr.မိုးကိုဦး+ မ၀င်းမင်းသစ် (ဘန်ကောက်)(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)(အလှူငွေ လက်ခံရရှိပြီး- ၁၆၀,၀၀၀ ကျပ်)၃.(၁၆.၁၂.၂၀၁၂)တနင်္ဂနွေနေ့ကိုသက်နိုင်ဦး+Dr.နှင်းဝတ်ကြည် မိသားစု(ထိုင်ဝမ်)မှသား-မင်းသစ်ထွန်း ၏ မွေးနေ့အလှူ(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)(အလှူငွေ လက်ခံရရှိပြီး- ၁၆၀,၀၀၀ ကျပ်) (၂၀၁၃ ခုနှစ်)ဇန်န၀ါရီလ၁.(၂၀.၁.၂၀၁၃) တနင်္ဂနွေနေ့ကိုခင်မောင်လွင်+မညိုညိုဆန်း မိသားစု(စင်္ကာပူ) မှကိုခင်မောင်လွင်၏ မွေးနေ့အလှူ။ဖေဖော်ဝါရီလ-၁.(၈.၂.၂၀၁၃)ကိုခင်မောင်ကျော်+Dr.နေကြည်မြင့်(စင်္ကာပူ)၂.(၁၁.၂.၂၀၁၃)တနလာင်္နေ့ကိုခင်မောင်လွင်+မညိုညိုဆန်း မိသားစု(စင်္ကာပူ) မှကိုခင်မောင်လွင်+မညိုညိုဆန်း တို့၏ မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်အလှူ။မေလ-၁.(၂၅.၅.၂၀၁၃)ကိုသက်နိုင်ဦး+Dr.နှင်းဝတ်ကြည် မိသားစု(ထိုင်ဝမ်)မှသား-မင်းသစ်ထွန်း မိသားစု မှကိုသက်နိုင်ဦး+Dr.နှင်းဝတ်ကြည် တို့၏(၁၀နှစ်)ပြည့် မင်္ဂလာ နှစ်ပတ်လည်အလှူ။(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)(အလှူငွေ လက်ခံရရှိပြီး)(WWKM)---------------------------------------မေတ္တာရှင်ဖောင်ဒေးရှင်း၊စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး ဆွမ်းလောင်းအသင်း အနေဖြင့် သံဃာအပါး (၄၀၀)ကျော်အား အပတ်စဉ် တနလာင်္နေ့တိုင်း (အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်း)များလောင်းလှူလျှက်ရှိပါသည်။ထိုကဲ့သို့ သံဃာတော်များအား ဆွမ်းများ မပြတ်လှူဒါန်းသွားနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ရာသက်ပန်ငွေပဒေသာပင် အလှူငွေများကို ပဒေသာပင်တစ်ခုလျှင် အလှူငွေ (၅၀၀၀၀ ကျပ်) နှုန်းဖြင့် ကောက်ခံလျှက်ရှိနေပါသည်။မွေးနေ့အလှူရှင်များ ၊အမှတ်တရ အလှူရှင်များရှိပါက အလှူရှင်များ၏ အလှူရက်များကို ဦးစားပေး ဆွမ်းများဆက်ကပ် လောင်းလှူစေပြီး အလှူရှင်မရှိသော တနလာင်္ဆွမ်းပတ်တိုင်းတွင် ရာသက်ပန် ဆွမ်းပဒေသာပင် အလှူငွေများဖြင့် ပျက်ကွက်မှုမရှိအောင် ဆွမ်းများဆက်ကပ် ၊လောင်းလှူပေးလျှက်ရှိနေပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာမှ အလှူရှင်များအနေနှင့် အရုဏ်ဆွမ်းတစ်နပ်စာအတွက် အလှူငွေ (၆၀,၀၀၀ ကျပ်) ၊နေ့ဆွမ်းတစ်နပ်စာအတွက် (၁၂၀,၀၀၀ ကျပ်)၊အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ ဆွမ်းရက်တစ်ရက်အတွက် (၁၇၀,၀၀၀ ကျပ်) ဖြင့် ကြိုတင်ဆက်သွယ်ကာ လှူဒါန်းကုသိုလ်ယူနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။ဆက်သွယ်လှူဒါန်းရန်-1.ဦးကောဝိဒ(စစ်ကိုင်း)Ph-092110202kovida9@gmail.com2.၀ါဝါခိုင်မင်း (မြန်မာပြည်) Ph-09 73095851nanwarwarmg2009@gmail.com 3.ကိုဥာဏ်အေး(စင်္ကာပူ)Ph-8139 9604 minlinkar21@gmail.com4.ကိုရန်နိုင်(ဂျပန်) Ph-080 3852 5214 (Softbank)nay.naywathan@gmail.com JP Bank Account ヤン　ナイン　ウイン　(14000-49306371)လေးစားစွာဖြင့်ဝါ၀ါခိုင်မင်း--------------------Dr.မြတ်ဥာဏ်+ဒေါ်ဝါ၀ါခိုင်မင်းSAKURA DENTAL Clinic & Dental Implant Center(Yangon)တိုက်(၃၅) ၊အခန်း(၀၂)ရွှေအုန်းပင်အိမ်ယာဝင်းရန်ရှင်းလမ်းရန်ကင်းရန်ကုန်။Ph- ၀၉ ၇၃၀ ၉၅၈၅၁ ၊ ၀၉၅ ၁၇၂ ၁၅၄http://warwarkhaingmin.blogspot.com(အမှတ်တရလေးများ)'